घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिन्छ भने हुन सक्छ यस्ता संकेत, जान्नैपर्ने यी कुरा ! – List Khabar
Home / रोचक / घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिन्छ भने हुन सक्छ यस्ता संकेत, जान्नैपर्ने यी कुरा !
घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिन्छ भने हुन सक्छ यस्ता संकेत, जान्नैपर्ने यी कुरा !
admin December 22, 2021 रोचक Leaveacomment 130 Views
घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिन्छ भने हुन सक्छ यस्ता संकेत, जान्नैपर्ने यी कुरा ! कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घ-टनाका बारेमा संकेत बाट अवगत गराइदिन्छन् ।
घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घटना बताइदिन्छन् । यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ । नयाँ घरमा प्रवेश गर्ने समयमा गृहस्वामीले म-रेको वा माटो लागेको माउसुली देखेमा उक्त घरमा बस्ने मानिस राेगी हुन सक्छन् । यस अपशकुनबाट बच्नका लागि पूर्ण विधिविधानका साथ पूजन गर्नुपर्छ।
माउसुलीले का-म-क्री-डा गरेको देख्नुभयो भने कुनै पुरानो मित्रसँग भेट हुनसक्ने संकेत हाे । दुई माउसुली झ-गडा गरेको देख्नुभयो भने तपाईंको कसैसँग वै-मनस्य हुन सक्छ । दिउँसो खाना खाँदा माउसुलीको आवाज सुन्नुभयो भने छिट्टै कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ तर यो दुर्लभ नै हुन्छ किनकि माउसुलीले प्राय रातमा मात्र आवाज निकाल्ने गर्छन् । माउसुली शरीरको कुन अंगमा खस्दा के फल पाईन्छ:-
१) टाउकोमा खस्दा सम्पत्ति पाइने सम्भावना २) कपालमा खस्दा मृ-त्युको बेला भएको सं-केत दाहिने ३) कानमा खस्दा गरगहना प्राप्ति देब्रे ४) कानमा खस्दाआयु वृद्धि ५) नाकमा खस्दा भाग्योदय
६) मुखमा खस्दा मीठो भोजन ७) दाहिने गालामा खस्दा उमेर बढ्ने ८) देब्रे गाला खस्दा पुरानो साथी ९)भेट गर्दनमा खस्दा य-शप्राप्ति १०) दाह्रीमा खस्दा ड-रलाग्दो घटना
११) जुँगामा खस्दा सम्मान प्राप्ति १२) आँखीभौंमा खस्दा धनहानि दाहिने १३) आँखामा खस्दा कुनै मित्रसँग भेट १४) देब्रे आँखामा खस्दा छिट्टै धनहानि १५)घाँटीमा खस्दा श-त्रु ना-श
१६) दाहिने काँधमा खस्दा विजय प्राप्ति १७) देब्रे काँधमा खस्दा नयाँ श-त्रु बन्ने १८) दाहिने हातमा खस्दा धनलाभ १९) देब्रे हातमा खस्दा सम्पत्ति ना-श २०) दाहिने हत्केलामा खस्दा कपडा पाइने
२१) देब्रे हत्केलामा खस्दा धन ना-श २२) दाहिने छातीमा खस्दा धेरै खुशी २३) देब्रे छातीमा खस्दा घरमा क्ले-श २४) कमरको बीचमा खस्दा आर्थिक लाभ २५) पिठ्युँको दाहिने भागमाखस्दा सुख
२६) पिठ्युँको देब्रे भागमा खस्दा रोग २७) पिठ्युँको बीच भागमा खस्दा घरमा क-लह २८) नाभिमा खस्दा मनोकामना पूर्ण २९) दाहिने जाँ-घमा खस्दा सुख ३०) देब्रे जाँ-घमा खस्दा शारीरिक पीडा
३१) दाहिने घुँडोमा खस्दा यात्रा ३२) देब्रे घुँडोमा खस्दा बुद्धिना-श ३३) दाहिने गोडोमा खस्दा ऐश्वर्य प्राप्ति ३४)देब्रे गोडोमा खस्दा बिरामी ३५) दाहिने पाइतालोमा खस्दा श्रीप्राप्ति ३६) देब्रे पाइतालोमा खस्दा व्यापार हा-नि
Previous यस्तो छ टेलिकमको लोकप्रिय सजिलो अनलिमिटेड प्याक, के-के छन् सुविधा?
Next इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा अनौठो घ’ट्ना, बिश्व चकित